Crossfit Yevatanga - Ndedzipi Ndidzo Dzakanakisa Maekisesaizi? | Bezzia
Susana godoy | 31/08/2021 16:00 | Exercise
Iye zvino izvo zvechinyakare zvadzoka, iwe unoda kuyedza zvinhu zvitsva? Saka kana iwe wakanzwa nezvechirango chakadai, isu tichakuudza zvese nezvazvo. crossfit yevanotanga. Nekuti ndeimwe yeanonyanya kutsvakwa uye anodiwa kurovedzwa, kunyangwe zvakaoma pakutanga, nekuti zvese zvinofanirwa kutaurwa.
Kunyangwe zvakadaro, chinhu chakanakisa chaungaite kupinza nyika yakadai nekuti iwe unozowana mhedzisiro inokukanganisa iwe. Nekuti iri chirango chauchadzikira nacho uremu asi pamusoro peizvozvo, iwe zvakare unotaurisa muviri wako wese uye uwane mhasuru mhasuru. Iwe uchaona kuti mushure memazuva ekutanga, ichave iri inonakidza kwazvo.
1 Tanga yako yekutanga crossfit maitiro ne squats
3 Kettlebell kudzidziswa
4 Kumiswa kudzidziswa
Tanga yako yekutanga crossfit maitiro ne squats
Mukudzidzira kwakadai, squats haigone kusavapo. Ivo ndeimwe yemitambo mikuru uye nekudaro, isu taida kuti ivepo pakati pevatangi zvakare. Asi chenjera, chokwadi ndechekuti iwe unogona kutanga akakosha squats, ndiko kuti, iwo aunoita nemuviri wako wega. Nekuti zvishoma nezvishoma iwe uchafanirwa kubata iyo bar uye uremu. Nekudaro, iwe unofanirwa kutanga waziva nezve mamiriro acho pachawo.
Patsanura makumbo ako muhudyu. Iko kubwinya kunodzoka kumashure pese paunodzika uye mabvi haafanire kupfuura mabhora etsoka. Usasendamira kure kumberi, uchitarisa kuti musana wako wakatwasuka. Kana zvese izvi zvadzorwa, unogona kuwana bhawa raunoisa munzvimbo yekumashure yemapfudzi asiwo nenzira yakatwasuka. Mune mamwe mazwi, iwe une nhanho nhatu dzaunotora kuti unyatso nyudza mu crossfit world: Basic squat, kumashure uye kumberi zviyereso.
Imwe yeiyo crossfit kurovedza kwevatangi vaunozoita pazuva rako rekutanga redzidzo. Nekuti ndechimwe chezvinhu zvikuru zvekutanga uye nekudaro, ivo havaigona kunge vachishayikwa mukusarudza kwedu. Iwe unotoziva mushe kuti zvinoshanda sei nekuti neakawanda mafambiro tichabatanidza basa rese ari maviri dumbu uye chipfuva, makumbo uye kunyangwe maoko. Kutanga tinotanga nemabvi edu akakotama uye maoko edu pasi kuti titore nhanho yakapusa uye tatambanudza makumbo edu kumashure kunge puranga. Isu tinozvimanikidza kusimuka, kusvetuka uye kudzokera kunzvimbo yekutanga. Iyo yakanyanya, hongu, asi zvakare inonatsiridza kusagadzikana kwemoyo wako nemapapu.
Iyo kettlebell kana ketera zvakare ndeimwe yeakakwana makomputa ekunakidzwa mukati meyambuka nzira yevatangi. Ehe, edza kusabata huremu hwakawandisa. Iwe unofanirwa kuseta muviri zvakanaka kuitira kuti musana usabatike. Unotambanudza maoko ako pasi wakabata huremu wobva waipa wekusunda ndokuisimudza. Hongu, ndeimwe yeakanyanya kurovedza muviri pakutanga, asi iwe unozoona kufambira mberi kukuru nawo. Pamusoro pekukurumidza kuita metabolism yako, iwe zvakare uchapisa mafuta.
Kuzivikanwa se TRX kudzidziswa Iyo imwe yeaya ayo achabatanidza kurudziro yedu nhasi maererano necrossfit yevatangi. Nekuda kwerudzi irworwo kana tambo, tinogona kudzidzisa nehuremu hwedu pachedu uye chinogara chiri chiratidzo chakanaka. Pakutanga, tinogona kutaura kuti inokodzera mhando dzese dzevanhu, chero bedzi tichigona kuchinjisa chiitwa kwavari.
Somuenzaniso, Iwe unogona kubata tambo nemaoko ako uye kuita squats, kana kuita kusundira-kumusoro nekutambanudza uye kuchinjisa maoko ako apo muviri unotambanudzwa kumashure. Kukwasva zvishoma hakuna kushata zvachose uye nekuda kweizvi unozvisungirira pamabote asi ikozvino unorega muviri wako uchidzokera kumashure zvishoma, kunyangwe watambanudzwa kudzikisa maoko ako zvakare uye kuswedera padyo nenzvimbo yekumisikidza. Ndeipi yauri kutanga nayo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Exercise » Crossfit yevanotanga